ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည် Inventory-9 ရမှတ်များကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုတွင်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထင်ဟပ်သလား။ abstinence အားထုတ်မှု၏အခန်းကဏ္oringကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ဒါဝိဒ်သည်ပေါလုကိုဖာနန်ဒက်ဇ, ယူဂျင်း YJ Tee & Elaine Frances ဖာနန်ဒက်ဇ
ကုသမှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဂျာနယ်, အတွဲ 24, 2017 - ပြဿနာ 3
ယခုလေ့လာမှုသည် Cyber ​​Pornography အသုံးပြုမှု Inventory-9 (CPUI-9) ၏ရမှတ်များသည်အမှန်တကယ်မဖြစ်မနေရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိမရှိစူးစမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CPUI-9 ရမှတ်များကိုရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိသောတားဆီးမှုနှင့်ကြိုတင်ကြံစည်ခြင်းမရှိခြင်း•အမှန်တကယ်မဖြစ်မနေအဖြစ်သတ်မှတ်သည်၊ အထီးကျန်သောအင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူ ၇၆ ဦး ရှိသည့်အုပ်စုတစ်စုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို ၁၄ ရက်ရှောင်ရန်နှင့်သူတို့၏မအောင်မြင်သောကြားနေကြိုးပမ်းမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားချက်များရရှိခဲ့သည်။ သာလွန်သောရူပဗေဒရမှတ်များ (သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းရမှတ်များမဟုတ်ပါ) ကိုတားမြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုကစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခရမှတ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသော်လည်းရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒရှုမြင်မှုမရ တွေ့ရှိချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု CPUI-9 ရမှတ် IP ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive အားဖြင့်ခန့်မှန်းကြသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကအမည်ခံစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုခြယ်လှယ် variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှုများ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုသုတေသနမေးခွန်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရှာသောအခါ
RQ1: ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှုနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏များအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်, CPUI-9 ရမှတ်ခန့်မှန်းတော်မူမည်လော
RQ2: ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏များအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်, CPUI-9 ရမှတ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်တော်မူမည်လော
baseline abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှု, IP ကိုအသုံးပြုမှုအခြေခံအကြိမ်ရေ, အခြေခံ CPUI-9 ရမှတ်များ, ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်အဘို့အထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ CPUI-9 ၏ Access ကိုကြိုးပမ်းမှုများ subscale ဆင်းရဲသားကိုပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကြောင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ CPUI-9 တစ်ခုလုံးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ယင်း၏ subcomponents သို့ပြိုပျက်ရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့တွေ့သော်လည်း, compulsive ရမှတ်များခံစားမခံခဲ့ရပါဘူး။ ရိပ်မိ compulsive ရမှတ် abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်ခန့်မှန်းအလှည့်ရှိကြ၏နှင့်ပျက်ကွက် abstinence အားဖြင့်ငါတို့သည်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအမှန်တကယ် compulsive အဖြစ် conceptualize ရာ X ကို abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှု, ကြိုးစားသည်။
H1: CPUI-9 ရမှတ်များပေါ်တွင်မှုမအောင်မြင်ပါ abstinence ကြိုးစားမှု
abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှုနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏များအတွက်ထိန်းချုပ်မြင့် CPUI-9 ရမှတ်ခန့်မှန်းမယ်လို့ပျက်ကွက်ကြောင်းကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအယူအဆ, ကိုမထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုနှင့် CPUI-9 အကြေးခွံမဆိုအကြားမည်သည့်သိသာထင်ရှားသောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ကျနော်တို့ (ဆိုလိုသည်မှာ abstinence ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့) abstinence ကြိုးစားမှုကျနော်တို့ကတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အပြုအမူသူ့ဟာသူကြောင်း conjectured ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ abstinence အားထုတ်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်လျှင်ပင် CPUI-9 ရမှတ်ခန့်မှန်းမယ်လို့ပျက်ကွက်ကြောင်းတွေးဆညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာညွှန်ကြားချက်ပေးထားသည့်အခါ compulsive ၏ကွန်ကရစ်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ကိုရိပ်မိလိမ့်မယ် တစ်ဦး 14 ရက်ကြာကာလအဘို့။ ယင်းအစားပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်များပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှုများ၏ဒီဂရီပေါ် မူတည်. ခံစား compulsive ရမှတ်များကသာသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းပြသသည်ဤလေ့လာမှု၌အကြှနျုပျတို့၏ဒုတိယအယူအဆဖြစ်ခဲ့သည်သောကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
H2: Failed abstinence CPUI-9 ရမှတ်များပေါ်တွင် X ကို abstinence အားထုတ်မှုကြိုးစားနေ
ကျနော်တို့ abstinence ကြိုးစားမှုကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏များအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မား CPUI-9 ရမှတ်များ, ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်မယ်လို့ပျက်ကွက်သောငါတို့ဒုတိယအယူအဆများအတွက်တစိတ်တပိုင်းပံ့ပိုးမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးခံစား compulsive ရမှတ်များမဟုတ်, စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့် CPUI-9 အပြည့်အဝစကေးရမှတ်ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုမြင့်မားဖြစ်ကြပြီး abstinence အားထုတ်မှုမြင့်မားတဲ့အခါအထူးသသည်, ခံစား compulsive subscale အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကြောင့်မျှသာ compulsive ၏သဘောထားအမြင်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ပေးသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ, သို့သော်ဤသည်လည်းတစ်ဦးအညီအမျှအရေးကြီးသော variable ကို, abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်လို့မဟုတျကွောငျးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ (;, Grubbs et al 9c ။ ။ Grubbs et al, 2015a), ဒါပေမယ့်တစ်ဦးတည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ compulsive ၏ရှေ့မှောက်တွင်အခြဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူးယခင်ကလေ့လာမှု CPUI-2015 အချို့ကှဲလှဲဘို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကောင့်အသစ်များ၏ကြောင်းအကြိမ်ရေသရုပ်ပြပါပြီ (Kor et al ။ , 2014) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတချို့တစ်ဦးချင်းစီမကြာခဏ IP ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် IP ကိုရှောင်ထဲမှာသိသိသာသာကွိုးစားမကျမည်အကြောင်း posits ။ ရှောင်ကြဉ်ရန်မရည်ရွယ်ရှိခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲ့သို့သော, သူတို့ကသူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုမည်သည့်လမ်းအတွက် compulsive ခဲ့ခံစားခဲ့ရဖူးဘူးပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သစ်တစ်ခု variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှု၏ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့နိဒါန်းအရေးပါသောအလှူငွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်း (ဆိုလိုသည်မှာမြင့်မား abstinence အားထုတ်မှု) မှရှောင်ကြဉ်ဖို့ခဲယဉ်းကြိုးစားခဲ့အခါ, ခန့်မှန်းပေမယ့်အများကြီးမအောင်မြင်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာမြင့်မားပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု) တွေ့ကြုံအဖြစ်ဤခံစား compulsive subscale အပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ရမှတ်များနှင့်အတူ aligned ။
CPUI-9 ရမှတ်များပေါ်တွင် Abstinence အားထုတ်မှု
ဒီဆက်နွယ်မှုမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ဦးချင်းခန့်မှန်းအဖြစ် abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလည်းပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်း, ခံစား compulsive subscale နှင့်အတူသိသိသာသာအပြုသဘောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆက်ဆံရေးမျိုး (သို့သော်မစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale နှင့် CPUI-9 အပြည့်အဝစကေး) သရုပ်ပြ တစ်ဦးတွေးဆ။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုကြုံတွေ့တဲ့သူမှသာတစ်ဦးချင်းစီ compulsive ၏သဘောထားအမြင်မှဦးဆောင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူကနေ compulsive အခြအံ့သောငှါပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ သာ. ကြီးမြတ် abstinence ကွိုးစားအားထုခံစား compulsive subscale အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခန့်မှန်း, ဤဆက်ဆံရေးဟာပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုပင်လွတ်လပ်သောမြင်ရ၏ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်သူ့ဟာသူနှင့်များ၏ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက် compulsive ၏သဘောထားအမြင်မှဆက်စပ်ကြောင်းအရေးကြီးသောဆိုလိုရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်သောရှင်းလင်းချက်စဉ်းစားပါ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတိုင်းတာမဟုတ်ပေမယ့်ပထမဦးစွာကအပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာ betweenabstinence အားထုတ်မှုနဲ့ရိပ်မိ compulsive သင်တန်းသားများကိုသူတို့မလျှင်ပင်, မျှသာညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်ခံစားအံ့သောငှါ၎င်းရိပ်မိအခက်အခဲသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အီကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါဖြစ်နိုင် အမှန်တကယ်ရှောင်ကြဉ်ရန်ပျက်ကွက်။ ရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားနေညစ်ညမ်းဘို့စွဲလမ်း၏အတွေ့အကြုံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနေစဉ်ရိပ်မိအခက်အခဲသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အီကိုဖော်ပြရန်အံ့သောငှါဆောက်လုပ်ရေးခံစားရတယ်။ Kraus နှင့် Rosenberg က (2014) "ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ waxes နှင့် wanes တဲ့ယာယီသော်လည်းပြင်းထန်သောတတ်ပြီးသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒနှင့်အတော်လေးတည်ငြိမ်အဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်အကွံအဖြစ်" အဖြစ်ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာသတ်မှတ် (စ။ 452) ။ ညစ်ညမ်းဘို့စွဲလမ်းသေချာပေါက်တစ်ဦးချင်းစီအကောင်းဖြေရှင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထိရောက်သော abstinence မဟာဗျူဟာများအထူးသဖြင့်ရှိလျှင်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်မလိုအပ်ပေမည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းခွေငျးငှာအလိုရှိသောနှင့် abstinence ပန်းတိုင်ကျူးလွန်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အခက်အခဲကြုံနေရ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကိုသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြု compulsive ရိပ်မိဖို့သင်တန်းသားများအတွက်လုံလောက်သောပါပြီပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာတဏှာသို့မဟုတ်သီအိုရီစွဲမော်ဒယ်များ (Potenza, 2006) ၏သော့ချက်ဒြပ်စင်ကိုယ်စားပြုတိုကျတှနျးထားသည်ကိုမှတ်သားသည်, တစ်ဦးအမှန်တကယ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေခြင်းအကြံပြုသည် DSM-5 (Kafka, 2010) အတွက် Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုစံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် စွဲလမ်း။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်း (နှင့်ဆက်စပ် Construction) အတွက်စွဲလမ်းညစ်ညမ်းထံမှ abstinence ဆန်းစစ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အရေးပါတဲ့ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အချို့သောသင်တန်းသားများအတွက်“ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားထုတ်မှု” သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ အချို့သောသင်တန်းသားများသည် abstinence အားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများ (ဥပမာ - စဉ်းစားခြင်းဖိနှိပ်ခြင်း၊ Wegner, Schneider, Carter, & White, 1987) တို့ကိုအသုံးချပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် IP ၏ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမှပြန်လည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်။ ရှုံးနိမ့်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအပြီးတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိရှိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကဲ့သို့သောပိုမိုထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်မည့်အစား၊ ရှောင်ကြဉ်ရန်“ ပို၍ ပင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း” သံသရာထဲ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (Twohig & Crosby, 2010) နှင့်မိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း တစ်စလစ် (Hook et al ။ , 2015) ပြီးနောက်။ ထိုကဲ့သို့သောအတွေးများ၊ IP များလိုမျိုးအတွင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံများဟာအလွန်ကြီးကြီးမားမားကြီးထွားလာပြီး၊ သို့သျောလညျး, ငါတို့ရှင်းလင်းချက်ဒီအချက်မှာမှန်းဆရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရိပ်မိ compulsivity စပ်လျဉ်း abstinence အားထုတ်မှု variable ကိုနားလည်ရန်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ CPUI-9 တစ်ခုလုံးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အခါ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြိုပျက်ရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အဆိုပါ CPUI-9, ထိုစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale သာတိကျတဲ့ဒိုမိန်းဟောကိန်းထုတ် (ဥပမာ, "ငါအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်") နှင့်ခံစား compulsive subscale မသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသာစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale မခံစား compulsive သို့မဟုတ် Access ကိုကြိုးပမ်းမှုများ subscales (et al တျောမူမညျ။ , 2016) နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ဖေါ်ပြခြင်းယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤသည်ကိုလည်းကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အစားသိမြင်မှုရှုထောင့် (ခံစား compulsive) ထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့် (Emotional ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ), သော CPUI-9, တစ်မူထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်အဘို့အကောင့်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်ကစားမည်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ 'ဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်ခံစား compulsive subscales related နေကြတယ်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းဟန်အဖြစ်သီးခြားကုသခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သုံးအရေးကြီးသောသီအိုရီသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမဦးစွာလက်ရှိလေ့လာမှု CPUI-9 ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အိုင်ပီမှရိပ်မိစွဲလမ်း, နှင့်အမှန်တကယ် compulsive အကြားယခင်က unexplored ကြားဆက်ဆံရေး elucidates ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာတှငျကြှနျုပျတို့ compulsive ၏သဘောထားအမြင်အမှန်ပင်အဖြစ်မှန်၏ရောင်ပြန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဒါဟာတစ်ကယ့် compulsive ပုံစံ (abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှု£ပျက်ကွက်) ထိုပုံနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှု, အ CPUI-9 အပေါ်ရမှတ် compulsive subscale ခံစားကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ငါတို့သည်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတောင်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကိုင်ထားပြီးနောက်ကျင်းပကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်မသက်ဆိုင်တစ်ဦးချင်းကိုယ်ကျင့်တရားညစ်ညမ်းမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၏, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ခံစား compulsive ရမှတ်များအမှန်တကယ် compulsive, ဒါမှမဟုတ် IP ကိုရှောင်အတွက်အခက်အခဲများ၏အတွေ့အကြုံ၏ရောင်ပြန်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ် compulsive အမှန်တကယ်စွဲမှတူညီခြင်းမရှိပါစဉ် compulsive စွဲ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တစ်ဦး IP ကိုအသုံးပြုသူအတွက်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင် IP ကိုမှအမှန်တကယ်စွဲတစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်အံ့သောငှါတင်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်တချို့အတိုင်းအတာအထိနေ့စွဲလုပ်နိုင်တဲ့ဖို့ CPUI-9 အပေါ်သုတေသနပြုစွဲ၏မျှသာအမြင်တဘက်, အမှန်တကယ်စွဲကတာဝန်ယူရမည်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale များ၏ပါဝင်၏သင့်လျော်သောရက်တွင်သံသယကိုသွန်းလေ၏။ အဖြစ်တသမတ်တည်းမျိုးစုံလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ (ဥပမာ Grubbs et al ။ , 2015a, ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု (ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု£ abstinence အားထုတ်မှု) တွင် conceptualized အဖြစ်အမှန်တကယ် compulsive စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive တွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီသေချာပေါက်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံခံစားကြဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အစား, စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များသိသိသာသာလည်းနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာထပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည် (Grubbs et al, 2015a; ။ အလိုရှိ et al, 2016 ။ ) ။ ဒီတစ်ခုကငျြ့တရားမနှစ်သက်နှင့်အမှန်တကယ် compulsive မသက်ဆိုင်သောသောအပြုအမူအတွက်ပါဝငျမှုကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည့် CPUI-9 ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ dissonance နေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အဘို့မှတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale များ၏ပါဝင်မှုကငျြ့တရားညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူက IP အသုံးပြုသူစုစုပေါင်းရိပ်မိစွဲရမှတ် inflates နှင့် IP ကို၏စုစုပေါင်းရိပ်မိစွဲရမှတ် deflates ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ရလဒ်တွေကို skew စေခြင်းငှါ, မြင့်မားတဲ့ခံစား compulsive ရမှတ်များ, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း၏အနိမ့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ရှိသည်သောအသုံးပြုသူများကို။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလူဦးရေနှင့်အတူအသုံးပြုရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးကိုမူလ "ပွစျရှိသညျဟူသော" စကေးပေါ်တွင်အခြေခံကြောင့်ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည် (Grubbs et al ။ , 2010), နှင့် Non-ဘာသာရေးလူဦးရေနှင့်အတူ၎င်း၏ utility ကိုနောက်ဆက်တွဲတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌မရေမရာဖြစ်နေဆဲ ဒီစကေးနှင့်ဆက်စပ်သော။ "ဆေးခန်းကိုသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲ" ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ထား B က, ဆေးခန်းသိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲ ... သောဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်လည်းမရှိ "ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တိုကျတှနျးထားရှိရာ DSM-5 များအတွက် Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုထားသည့်ရောဂါရှာဖွေစံအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်အပြုအမူ "(Kafka 2010, p ။ 379) ။ ဒါဟာစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale ဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲ၏ဤအထူးသဖြင့်မျိုးသို့ပုတ်ကြောင်းသံသယဖြစ်ပါတယ်။ အချက်တွေကို phrased နေသောလမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ, "ငါအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြီးနောက်ဖျားနာ / ရှက်ကြောက်ခြင်း / စိတ်ဓာတ်ကျခံစားရသည်") ဒုက္ခဆင်းရဲသည့်အကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူနဲ့ဆက်စပ်မရစရာမလိုဟု, ဒါပေမယ့်အကြောင်းကိုယူဆောင်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် ရုံပင် non-compulsive လမ်းအတွက်အပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးမှ။
တတိယ, ဒီလေ့လာမှု compulsive ၏သဘောထားအမြင်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့စပ်လျဉ်းအရေးပါသော variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါဟာစာပေအတွက် IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေ abstinence အားထုတ်မှု၏အကောင့်သင်တန်းသားများကို '' ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်သို့ယူပြီးမရှိဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကြောင်း abstinence အားထုတ်မှုကိုသရုပ်ပြနှင့်ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါ, သာ. ကြီးရိပ်မိ compulsive ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အခက်အခဲကြုံတွေ့မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် compulsive ရှိစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးချင်းစီမှထုတ်ဖေါ်စေခြင်းငှါငါတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အပေါ် abstinence အားထုတ်မှု သာ. ကြီးရိပ်မိ compulsive ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံကိုတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်အဖြစ်ရှောင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဘို့စွဲလမ်းမှာအခက်အခဲများ၏အတွေ့အကြုံကိုဆွေးနွေး ။ သို့သော်လက်ရှိမှာ abstinence အားထုတ်မှုရိပ်မိ compulsive ဆက်စပ်ပေးသောအားဖြင့်အတိအကျယန္တရားမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲ, နောက်ထပ်သုတေသနတစ်ခု Avenue ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းကြောင်းသတင်းပို့သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကုသမှုအတွက်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းတင်ပြသူများပြားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြရန်စာပေတွင်သက်သေအထောက်အထားများရှိသည် (Cavaglion, 2008, 2009; Kalman, 2008; Mitchell, Becker-Blease, & Finkelhor, 2005; Mitchell & Wells, 2007) ) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိထင်မြင်ချက်၏တိကျမှုအပေါ်သံသယမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မိမိတို့၏အိုင်ပီဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုတွင်အတင်းအကျပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရရှိပါကဤအမြင်များသည်အမှန်တကယ်ပင်ထင်ဟပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့် 'ရူပဗေဒဆိုင်ရာရူပဗေဒ' သည်အသုံး ၀ င်သည့်အမြင်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီး၊ အကယ်၍ အမြင်သည်အဖြစ်မှန်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လျှင်၊ ၎င်းတို့၏ IP အသုံးပြုမှုတွင်အတင်းအဓမ္မလုပ်ခိုင်းခြင်းခံရသူများသည်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်။ သူတို့၏အမူအကျင့်များကိုပြောင်းလဲရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းဖို့လိုမလိုဆုံးဖြတ်ရန်ထိုသူတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့၏ IP အသုံးပြုမှုသည်အတင်းအကျပ်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေမသေချာသောသူများသည်ဤလေ့လာမှုတွင်အလုပ်လုပ်သူကဲ့သို့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကိုခံယူနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများသည်သဘောထားအမြင်များကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုမှတဆင့်လက်တွေ့တွင်အခြေပြုထားကြောင်းသေချာစေရန်အသုံး ၀ င်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် compulsive ၏သိမြင်မှု Self-အကဲဖြတ်တစ်ဦးချင်းစီကငျြ့တရားညစ်ညမ်းမနှစ်သက်လျှင်ပင်တိကျမှုဖြစ်လာဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Clinician ကိုယ်ကျင့်တရားကိုသူတို့ moralistic ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အလွန်အမင်းရောဂါဗေဒအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအဖြစ်ညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏သိမြင်မှု Self-အကဲဖြတ်ပယ်ချဖို့လည်းအမြန်မဖွစျသငျ့သညျ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Clinician, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ client များသဖြင့်ကြုံတွေ့ဆိုတာကိုသတိရဖို့ကိုယ်ကျင့်တရားညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူအထူးသဖြင့်သူမြားကိုလိုအပ်ပါတယ်, compulsive ၏သိမြင်မှု Self-အကဲဖြတ်ထံမှသီးခြားဖြစ်ပေါ်လာသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအနည်းဆုံးက CPUI-9 ဖြင့်တိုင်းတာသည်လမ်းအတွက်သေချာပေါက် compulsive IP ကိုအသုံးပြုမှု၏ရလဒ်မရှိ, သီးခြားပြဿနာအဖြစ်ကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန် Clinician လည်းတစ်ဦးချင်းသေချာပေါက်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုခံစားခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏ IP ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive ကြုံနေရနိုင်ကိုသတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ဦးကန့်အသတ်တစ်ခု variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှုအသစ်ဖြစ်၏နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ဆဲရေးနားလည်သဘောပေါက် variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သာတစ်ခုတည်းကို item တိုင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရကန့်သတ်, abstinence အားထုတ်မှုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ နယူး Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံပိုကောင်းင်း၏ယန္တယားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဆောက်လုပ်ထားခံရဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ထို့ပြင် abstinence အားထုတ်မှုသူတွေဟာတစ်ဦးစမ်းသပ်ကိုင်တွယ်မှတဆင့်သွေးဆောင်ခဲ့ကာရလဒ်အတိုင်း, ပထမနေရာအတွက် IP ကိုရှောင်သင်တန်းသားများအတွက်အခ်ါလှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုမရှိခြင်းအဲဒီမှာပါပြီပေလိမ့်မည်။ အနာဂတ်သုတေသနလည်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပေမယ့်ဧကန်အမှန်ကွဲပြားသော IP ကိုရှောင်ဖို့အကောင့်လှုံ့ဆျောမှုသို့ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာတွန်းအားသည် abstinence တာဝန်သင်တန်းသားများအားဖြင့်ချဉ်းကပ်မည်သို့သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, ဘာပဲအကြောင်းရင်းများ, IP ကိုရှောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်မွေးရာပါတစ်ဦးကစက္ကန့်ကန့်သတ်ကြောင့် 14 ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းသရုပ်ဆောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ 14 ရက်ကြာကာလ compulsive ၏သဘောထားအမြင်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ setting ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမည်သို့ရှုပ်ထွေးရောင်ပြန်ဟပ်ဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်တဲ့ကာလအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကိုအောင်မြင်စွာ 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့, ဒါပေမယ့်သူကပိုပြီးခက်ခဲအချိန်တစ်ပိုရှည်ကာလအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တွေ့နိုင်ဘို့ဥပမာ, ဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ abstinence ကြာချိန်တစ်ဦးခြားနားချက်စေသည်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, ကွဲပြား Duration ၏ abstinence တာဝန်များကိုနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့အတှကျဒါဟာအသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကတတိယန့်အသတ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့နမူနာတွေ့ရှိချက်များ၏ယေဘုယျကန့်သတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်တန်းသားများကိုအရှေ့တောင်အာရှအထီး ရှိ. , ကြီးမားတဲ့အများစုအနေနဲ့ဘွဲ့ကြိုစိတ်ပညာကျောင်းသားလူဦးရေရဲ့ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင် non-လက်တွေ့လူဦးရေကလက်ရှိလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်ဟာလက်တွေ့လူဦးရေမှယေဘူယျမရနိုင်ဆိုလိုတာက, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲဒီမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏လမ်းအခြေခံအကြိမ်ရေအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများမရှိခြင်းနှင့် abstinence ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့, သင်အတိတ် 14 နေ့ရက်ကာလ၌ IP ကိုရှုမွငျခဲ့ပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ "ဆိုလိုသည်မှာအကြိမ်ရေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခဲ့သည့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် "အနေဖြင့်ယခင်သုတေသန (Grubbs et al ။ , 2015a, etc) (နာရီ) သုံးစွဲအချိန်ပမာဏ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာကြပါပြီ။ နာရီအသုံးအနှုန်းများအတွက် variable ကိုတိုင်းတာခြင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပိုမိုရည်မှန်းချက်အရေအတွက်အတိုင်းအတာပေးပေမဲ့, ဒီနည်းလမ်းကိုတစ်ဦးအဆင်မပြေတာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်အချိန်ကြောင်းငွေပမာဏကိုသေချာပေါက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းသို့ဘာသာပြန်ရန်မထားဘူးသည်။ ဥပမာ, တစ်ဦးချင်းတစ်ခုတည်းထိုင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသုံးနာရီသုံးစွဲနှင့်သုံးစွဲအချိန်ပိုမိုဒါပေမယ့်နိမ့်ကြိမ်နှုန်းထင်ဟပ်, အခြား 13 ရက်ပေါင်းညစ်ညမ်းရှုမြင်ပါဘူးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဖြစ်နိုင်သောအခြားတစ်ဦးချင်းစီ သာ. ကြီးမြတ်ကြိမ်နှုန်းပေမယ့်ခြုံငုံသုံးစွဲလျော့နည်းအချိန်ထင်ဟပ်, ညစ်ညမ်း၏ 10 မိနစ် 14 ရက်ကြာကာလနေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှုတိုင်းတာရန်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းအကြိမ်ရေနှင့်မစုစုပေါင်းနာရီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တင်ပြသည်။ discrete ဖြစ်ရပ်များဦးချင်းစီ discrete "စလစ်" [ပျက်ကွက်] abstinence အားထုတ်မှုလာမည့်ကြိုးပမ်းမှုအရိပ်ကို, ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပြီးနောက် IP ကိုကြည့်ရှု abstinence မှာပျက်ကွက်ကြိုးစားမှု (ဆိုလိုသည်မှာမှတ်စေခြင်းငှါ, လမ်းပိုမိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအဖြစ်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုတစ်ဦးပါဝင်သူစဉ်းစား IP ကိုရှုမြင်, နောက် ... ပြီးတော့)။ သို့သော်ဤနည်းဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာတဲ့ကျဘက်ကိုဦးချင်းစီ discrete "အချိန်" လို့ပါဝင်သူအမြင်များညစ်ညမ်းသုံးစွဲအချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မတရားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံရုပ်ပုံများအတွက်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအကောင့်သို့ IP ကိုအသုံးပြုနှစ်ဦးစလုံးအတိုင်းအတာယူနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု CPUI-9 ရမှတ်များအမှန်တကယ် compulsive ၏ရောင်ပြန်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာကျနော်တို့ CPUI-9တစ်ခုလုံးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အခါ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြိုပျက်ရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏သာစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်ခန့်မှန်းခြင်း, compulsive ရမှတ်များခံစားဘူး။ ခန့်မှန်းဆန့်ကျင်, abstinence ကြိုးစားမှုဟာ CPUI-9 အကြေးခွံမဆိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမရမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ယင်းအစား abstinence ကြိုးစားမှုမြင့်မားသော abstinence ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်ကဆက်ပြောပါတယ်, ခံစား compulsive ရမှတ် (သို့သော်စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များ) ခန့်မှန်းမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အထူးသအခါ abstinence အားထုတ်မှုမြင့်မားခဲ့ခံစား compulsive ရမှတ်မြင့်မားတဲ့ခဲ့ကြသည်မြင့်မားခဲ့ကြ abstinence ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ငါတို့သည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိခံစား compulsive ရမှတ်မသက်ဆိုင်သည့်တစ်ဦးချင်းစီကငျြ့တရားညစ်ညမ်းမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၏, အမှန်တကယ် compulsive ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုသည်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတောင်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကျင်းပကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale အမှန်တကယ် compulsive နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့စဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လည်း, ထို CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ဖို့စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale ၏သင့်လျော်သောအကြောင်းကိုမေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။ ပိုများသောအမြင်ကျယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုပိုကောင်း compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့လိုအရေးပါတဲ့ variable ကိုအဖြစ် abstinence အားထုတ်မှုကိုမိတ်ဆက်။